afjary biyuhu - Shiinaha Weifang Sea Joy Ganacsiga
guddiga walxaha waxaa si balaadhan looga isticmaalo alaabta iyo decoration gudaha. Iyada oo guryaha wanaagsan, sida, fabricability fudud, xoog isqaloocinta sare, fur haysta awood xoog leh, kulaylka u adkaysta, anti-guurto ah, muddo dheer oo aan lahayn saamaynta xilliyeed.
Product Name afjary biyaha afjary -Plain, Melamine soo foodsaarayso ama Veneer soo gudboonaadey afjary
size 1220mm * 2440mm (4'x8 ') ama size kartoo.
Dulqaadanayn dhumucdiisuna <+ - 0.2mm
Face / Back Caraabaah, warqad melamine ama veneer
Melamine Paper Color 1.Wood Midho Color
sida: Maple, sapele, geed, ash, tufaax, Beech, cherry, teak, walnut, wenge, geedkii, kabtiisa, iwm
sida: white, cawl, iyo buluug, cagaar ah, madow , casaan, oranji, casaan, huruud ah, iwm
Veneer Species bjørk, caawitaanka, ash, sapele, walnut, teak, geedkii, Maple, Beech, cherry, Rose cas, ECT.
Veneer Grade A, AA ama AAA
Isagoo ku sii jeeda Type Single-Faced, Double-Faced
Daaweynta dusha Matt, Emboss, taabasho, Wood Embossing, dhalaalaya, iwm
Waxyaabaha Muhiimka ah Libneh, geed midho, geed ama chips alwaax isku qasan
xabagta MR, WBP, Melamine Glue
mugga 680 ~ 730kg / m3
qoyaanka Content 5% -10%
Isticmaalka & Performance guddiga walxaha waxaa si balaadhan looga isticmaalo alaabta iyo decoration gudaha. Iyada oo guryaha wanaagsan, sida, fabricability fudud, xoog isqaloocinta sare, fur haysta awood xoog leh, kulaylka u adkaysta, anti-guurto ah, muddo dheer oo aan lahayn saamaynta xilliyeed.
xirxirida Standard dhoofinta sariirtaada Baako - dhakhso iyo ammaan si ay u hoos ku shuban, kharashka yar eedeeyay shaqada, laakiin tiro yar oo isku mar ah.
Baako dabacsan - shuban yaabaa in tiro badan oo ku saabsan shixnad ka mid ah, laakiin ku kici eedeeyay shaqada dheeraad ah si ay u hoos ku shuban.
Supply Kartida 20000 mitir oo saddex jibbaaran / bishii
Payment Shuruudaha 30% T / deposit T hor-soo-saarka iyo dheelitirka dhanka ah nuqul ka mid ah B / LL / C.
Waqtiga dirida 15 maalmood gudahood ka dib markii la helo deposit ama L asalka / C arko
Ballaaran codsatay in alaabta. armaajooyinka jikada, miiska Office, moldings guddi, nooc cuntada, albaabka gudaha.
1. Samaynta Furniture
Alaabta in kharash badan u isticmaali kartaa noocyo kala duwan oo fiberboard iyo qori dabiiciga ah milled. Muuqashada isla karo iyadoo guddiga walxaha asaasiga ah iyo dhawr shirkadaha alaabta caadiga ah ayaa weyn
isticmaalkiisa guusha sida ay wax ugu weyn.
2. Golaha Wasiirada
Xalka ugu wanaagsan waa in la isticmaalo xaaladaha guddiga walxaha iyo wejiyo qoryo dhabta ah. Tani waxay abuurtaa golaha wasiirada si caddaalad ah oo qaali ah oo ka dhigaysa guddiga walxaha wax soo saarka ah oo caan ah in industry ee.
3. Lahjadda Home
meesha ugu caan ah Lahjadda ku dhawaad ​​daaqadaha, albaabada, dabaqa iyo saqafka qaab goo iyo wax taaj oo kale. Waxyaabahan la sameeyey jaban markii ay ka abuuray guddiga walxaha yihiin. guddiga walxaha waa
fududahay in la rakibo iyo xataa fududahay in rinjiga.
guddiga walxaha caadiga ah looma isticmaalo sida Gogosha weyn laakiin waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu daboolo dabaq tir in mar hore ay joogaan guri.
1) High xoog laabaya
2) toosan yar Wehliyaha ballaarinta
3) Strong hayo ciddiyaha
4) caddeyn Qoyaanka iyo shaqo fudud
5) dhismaha kugu dhagan iyo xoog sare
6) No ratten ama suuska
7) warshadu hawada formaldehyde Low
Qalabka sumcad free 7.Provide daabaco summad macaamiisha iyo horumarinta.
Previous: Veneer soo foodsaarayso afjary